Otu Easy dọwara Music si iPhone on Mac
> Resource> Music> Rip Music si iPhone on Mac
"Ọ dị onye maara otú dọwara music si iPhone 6S. M ebudatara ụfọdụ free songs si Internet site iPhone, ma ugbu a, m ike inwe ha pua iTunes Library, ma ọ bụ na kọmputa dị ka mma. Biko nye m aro ụfọdụ ma ọ bụ ndụmọdụ. ekele! "
Ọ bụ n'ezie a isi ọwụwa nwere songs araparawo iPhone na-apụghị dọwara songs si iPhone ka iTunes Library ma ọ bụ kọmputa. Ọ bụrụ na i bu n'obi dọwara music si iPhone na iTunes, m mara mma n'aka na ị na-aga na-ada n'ihi na iTunes nwere ike ime ihe ọ bụla. iTunes bụ ihe otu ụzọ na-ngwá ọrụ - syncs music si iTunes ka iPhone, ma ike dọwara music si iPhone. Na nke a, dọwara music si iPhone, i kwesịrị iji a ọkachamara iPhone Ripper, dị ka Wondershare TunesGo. Nke a na-esonụ Ama bụ banyere otú dọwara music si iPhone na Wondershare TunesGo. Na-agụ na ịmụta nkọwa.
Nzọụkwụ 1. Wụnye iPhone Ripper
Download na wụnye iPhone Ripper na kọmputa gị. Ma Wondershare TunesGo (Win) na TunesGo (Mac) dị. Ndị na-esonụ, Aga m na-Mac version dị ka ihe atụ na-agwa gị otú ị dọwara music si iPhone on Mac. N'ihi na Windows ọrụ, na-agbalị site onwe gị ma ọ bụ na-agụ TunesGo (Win) ọrụ ndu.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ iPhone na Mac
Jiri eriri USB na iPhone abịa na jikọọ iPhone na gị MacBook Pro, MacBook Air, ma ọ bụ iMac. Ugbu a TunesGo arụ ọrụ nke ọma na ihe ọ bụla Mac na-agba ọsọ Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10.10, 10,9, 10,8, 10.7, 10.6. Na TunesGo ugbu a-akwado ndị niile iPhone ụdị, gụnyere iPhone 6S (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 5s, iPhone 4. Iji mụtakwuo banyere akwado ngwaọrụ, biko pịa ebe a.
Nzọụkwụ 3. Rip music si iPhone on Mac
Ẹkedori iPhone music Ripper - TunesGo (Mac) na gị Mac na ọ ga-amata gị iPhone ozugbo, na-egosipụta gị iPhone na isi window. Site na isi window, ị pụrụ ịhụ na niile mgbasa ozi faịlụ na-ota n'ime ige: Music, Pọdkastị, iTunes U, Audiobooks, Voice Memos, Movies, Pọdkastị, iTunes U, TV na-egosi, na Photos.
Pịa Music na ekpe nke Ohere ikpughe a ọhụrụ window. Site ọhụrụ window, n'akụkụ aka nri, ị pụrụ ịhụ faịlụ niile n'okpuru a ụdị. Na mgbe ahụ ị nwere ike họrọ songs na ị chọrọ dọwara ma pịa 'Export' ma ọ bụ 'Mbupụ na iTunes' na-amalite ripping usoro.
Ke kiet ke otu egbutu swoop, ị ga-ahụ na ị na-ọma dọwara music si iPhone gị iTunes Library ma ọ bụ Mac. Lee otú mfe ọ bụ dọwara music si iPhone na Wondershare TunesGo (Mac). E wezụga nke a, e nwere ọtụtụ salient atụmatụ ị pụrụ ime ka jupụtara ojiji nke maka inwe a ọzọ adaba mobile ndụ. Ntak download iPhone Music Ripper - Wondershare TunesGo inwe a na-agbalị site onwe gị?